Kholmogorov egor: Biography of the intatheli. Amaqiniso ethakazelisayo le izintatheli isitayela imisebenzi yakhe
Holmogorov egor Stanislavovich Ngazalelwa eMoscow ngo-1975. Lena umbhali ethandwa, odlalela amagugu Russian futhi inkolo. Futhi abaningi abawazi ngokuthi umhleli induna indawo, sithwele isihloko esilandelayo: "okusha Chronicle" futhi "Isiphequluli Russian". Futhi ukuthi ukuyiphi ibinzana "Spring Russian", usebe ithemu. Ngokuvamile, lokhu umuntu ngempela okufanele athole ukunakwa.
Mayelana ekuqaleni imisebenzi lesibonwa
Kusukela ngo-1994 Kholmogorov egor waziphatha journalism. He is nombhali inombolo bethenjiswa inzalo enkulu izincwadi kwalokho ihlaziya ngokucophelela ukusongeka Russian Federation, isimo senkolo nezombangazwe. Ngaphezu kwalokho, umsunguli uyazinaka ifilosofi, conservatism kanye nemibono yayo, kanye Lobu-Orthodox LaseRussia futhi emlandweni wezwe lakithi. Imisebenzi yakhe yokuqala aqala ukunyatheliswa ephephandabeni "Namuhla" futhi "uAlfa no-Omega". Kholmogorov egor wavuma ukuthi ngaleso sikhathi wayesevile eminyakeni "intsha Orthodox ovulekile ngubani zishukunyiswa" Orthodox "Chesterton nesithi" Screwtape Izincwadi "Lewis".
Kholmogorov egor ngo-1998, kanye Konstantin Krylov eyasungulwa website abadumile Russian ubuzwe, okuyinto yaziwa ngokuthi "Doctrina.Ru". By the way, isikhathi eside wayengumuntu angasi-canonical Orthodox Autonomous Church (iminyaka 8 - kusukela 1996 kuya ku-2004).
Kholmogorov egor kakhulu kunoma yiluphi uhlobo nihilism zomlando nabeZizwe. Waze wabhalela njengenhlangano ngemibono experiment pheshana, alibiza ngokuthi "Ithuba Right. Uhlelo ingukuphila ezinhle, umnotfo enempilo futhi inqubomgomo fair. " Futhi-ke, ngemva kokufunda umsebenzi wakhe, wathi kungenzeka ukuthi omunye wemisebenzi engcono, okuyinto wakwazi ukubhala kuphela.
Ngo-2006, umhlaziyi Russian Yegor Kholmogorov ngenkuthalo baqhubeka nemisebenzi yakhe lesibonwa. Ngo-2006, wasebenza emisebenzini enjengokwakha ithelevishini ngokuthi "Ukusabela Russian." Nokho, Umsebenzi wamiswa ngo-2007. Kodwa ngokubamba iqhaza kulo, Yegor efika okokuqala eCrimea futhi Sevastopol. I handsome itshe elimhlophe, njengoba emkhomba kwayena isikhulumi, lapho aqala khona ukuthandana kakhulu kangangokuba wabeka ephindela Russia omunye imigomo eyinhloko ekuphileni.
Ngo-2011, lapho babehlukaniswa kakhulu avele umphakathi - emhlanganweni isizwe Russian, okuyinto ngokuthi Phikelelani kwedemokhrasi eRussia. Futhi ngo-March 2012, wakhethwa yilungu lekomidi ekuhlelweni iqembu leNational Democratic Party. Kodwa ngemva kwezinyanga ezimbili wesula. Ngemva kwalokho, wathuthela ku-TV - NTV waba nashayela zohlelo "Wasserman".
Ngokuvamile, yilomuntu ngempela umsebenzi ezithakazelisayo. Ubizwa abathandwa abafundi abaningi Russian ngenxa yezizathu eziningi. Kodwa omunye amanga khiye iqiniso lokuthi lokhu umuntu - Patriot kweqiniso futhi ohlonipha ngempela isithunzi kanye namagugu abantu bayo, uzama ukugcina kwabo zonke izinhlobo izindlela. Futhi-ke, angeke sehluleke ukuheha eyingqayizivele, isitayela zakhe ezimenza ahluke zokubukwa. Ukufunda Yegor - uyinto ekhethekile. Ngakho, kubalulekile ukuba sixoxe ngalokhu kabanzi ngaleso sikhathi, ukuba unombono tematheksthi wakhe, okuyinto empeleni impela eningi.
Egor Kholmogorov - isikhulumi, onendlu isitayela ethakazelisa kakhulu. Iphinde kufanele kube intatheli ezinhle ezifana. Akazange anqikaze ukuveza kuqondile ezisezincwadini zabo ezinyathelisiwe, kodwa akusho ukuthi abeke umbono wakhe. Wamane uzwakalise - emnene futhi abanye ukuhlaselwa ngokweqile. Kholmogorov - ke ngokuyinhloko umhlaziyi. Ubani ngenjabulo uphendukela umlando, ingemuva, uyakhumbula imininingwane encane engase ibonakale encane - kodwa hhayi they are abalulekile kakhulu. Kusukela "izingcezu" ezincane zolwazi kwakha olulodwa, ebalulekile, ngokunengqondo eyakhelwe isosha esihlatshelelwayo kube nenjongo, okuyinto amanga ebusweni. Imisebenzi Kholmogorova ukufunda kalula. Zitholakala kuwo wonke umuntu. Awudingi isikhathi esengeziwe ukucabanga, ukuhlaziya, ukuzama ukuqonda okuthile. Ematheksthi of Yegor konke isivele kwenziwe. Njengoba Bathi - ugaye. Umfundi angakwazi kuphela ukufunda Ukugaya.
Filmography Irina Rozanova nemisebenzi yakhe umhlabeleli
Vudi Harrelson: Filmography futhi ngcono njengoba kumdlali
Amazing Rose floribunda: zokutshala nokunakekela
Isikhumbuzo incwadi "O" e Vologda: umlando, incazelo, isithombe
Isimo ngomuzwa umndeni: isitatimende sokuqala
Izakhiwo ze-Steel - isisombululo esisha sokwakhiwa kwakho!